Ireo zavatra tokony ho fantatra alohan'ny fanangonana Machu Picchu Tour
Afrika & Afovoany Atsinanana
Torohevitra momba ny fanangonana Machu Picchu Tour
Inona no tokony hodinihina mialoha ny famerenam-bidy amin'ny mpizaha trano
Miaraka amin'ny safidy maro safidy, ny fisafidianana ny fitsangatsanganana Machu Picchu dia mety ho toy ny fisalasalana mampiahiahy. Ny dian-tongotra mankany amin'ny tranokalan'ny Inca dia indray mandeha amin'ny fiainana mandritra ny androm-piainan'ny olona maro, ary ny famandrihana fitsidihana tsara dia afaka manova ny fahasamihafana rehetra. Ireto misy soso-kevitra sasantsasany raisina an-tsainao rehefa mandanjalanja ireo safidy misy.
Soso-kevitra 1: Manapaha hevitra ny handehanana any Machu Picchu
Ny fotoam-pizahantany ho an'ny mpizahatany ao Cusco sy Machu Picchu dia miala ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra, izay tena be atao tokoa ny volana Jona sy Jolay ary Aogositra.
Ity no vanim-potoana maina, miaraka amin'ny lanitra mazava kokoa sy ny isan-jaton'ny rotsak'orana isan'andro. Tsara ho an'ny sary izany, saingy tsy tsara raha tianao ny hisoroka ireo mpitsidika mpizahatany. Ny vanim-potoana ambany dia mitondra loza mitatao kokoa noho ny rahona sy ny orana, saingy ho vitsy dia vitsy ny olona ao amin'io tranonkala io.
Soso-kevitra 2: Eritrereto ny safidinao momba ny Tour de Machu Picchu
Ny dingana manaraka dia manapa-kevitra ny karazana fitsangatsanganana tianao. Misy safidy samihafa azo atao, mba hahafahanao mahita zavatra mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanao sy ny fomba fitetezanao.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo faritra manan-danja tokony hieritreretana:
Aiza no hanombohana? Te-hiditra amin'ny vondrona mpizaha-tany ve ianao rehefa tonga any Lima, sa te-handefa an'i Cusco tsy miankina ary maka azy avy any?
Tranonkala na fialan-tsasatra? Tianao ve ny mandeha amin'ny Inca Trail (na lalana hafa) na mandeha mivantana mankany Machu Picchu amin'ny lamasinina sy bus?
Budget na Luxury? Misy mahaliana sasany ny fitsangatsanganana Machu Picchu mba hisafidianana, saingy mety ho faly amin'ny safidy tsotra sy mora kokoa ve ianao?
Rehetra-manavaka? Ny fitsangatsanganana sasany dia ahitana ny fisotroan-dronono any amin'ny seranam-piaramanidina, trano fandraisam-bahiny ao Cusco ary sakafo miaraka amin'ny vondrona misy anao. Raha mpandeha lavitra tsy miankina ianao, dia mety tsy tianao ny fanampiana fanampiny fanampiny.
Fiverenana lehibe: Fitsangatsanganana fohy mahazatra no hitondra anao any Machu Picchu ary avy eo dia hiverina any amin'ny hotely. Azonao atao ihany koa ny mamandrika vakiraoka malalaka iray ary mandany andro vitsivitsy efa nomanina mialoha ny fijerena ireo toerana maro manodidina an'i Cusco sy ny Lohasaha Masina.
Soso-kevitra 3: Fidio ny orinasa Machu Picchu Tour
Misy karazany roa ny orinasa mpizaha tany, ireo akanjo goavana iraisam-pirenena, ary ireo masoivoho Peroviana miorina ao Lima sy Cusco. Samy manana safidy tsara sy ratsy avokoa ireo karazany roa ireo, noho izany dia ny habeny irery no tsy mampiseho ny kalitao.
Mpanoro hevitra mahaleotena avy amin'ny manam-pahefana: Mandinika ny fanontana farany amin'ny boky torolàlana tsara ho an'ny fanamarihana sy ny soso-kevitra. Tokony hijery anaty aterineto ihany koa ianao, fa ataovy azo antoka fa misy ny vaovao ary azo antoka ny loharano. Ho an'ny lisitr'ireo orinasam-pizahan-tsika manokana dia vakio ny The Best Inca Trail Tour Operators ao Però (ireo rehetra dia manolotra safidy hafa ho an'i Machu Picchu sy ireo làlana hafa any amin'ny Lohasahan'i Masina).
Foibem-pifamoivoan-dry Peru: Fihetseham-panoherana sy fitsidihan'ny Machu Picchu vao haingana ny sehatra fiadian-kevitra. Tadidio fa mety tsy mifanentana amin'ny hevitrao ny hevitra iray momba ny olona iray, ary tadidio fa ny sampan-draharaha misahana ny fitsangatsanganana indraindray dia manoratra ny lahatsoratra. Ampiasao ny toro-hevitra avy amin'ny forum ho fiandohan'ny fanombohana; Aza miantehitra amin'ny fanoratana manjelatra fotsiny.
Anontanio ireo mpandeha hafa: Raha any Però ianao, dia mangataha toro-hevitra amin'ny mpizaha tany hafa. Hahita olona marobe izay efa tonga tany Machu Picchu ianao, indrindra any amin'ireo toerana fialan-tsasatra toy ny Lima , Arequipa ary, mazava ho azy, Cusco.
Soso-kevitra 4: Jereo izay rehetra nataon'i Machu Picchu Tour
Amin'izao fotoana izao, tokony hanana fifantenana tsara amin'ny fitsangatsanganana Machu Picchu ianao mba hifidianana. Alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra farany, tsidiho ny tsipirian'ny tsaratsara kokoa isaky ny fitsangatsanganana mba hahitanao ny vola azonao amin'ny volanao.
Ho an'ny fitsangatsanganana tokana (mivantana mankany amin'ilay tranokala, tsy misy fitsangatsanganana), jereo ny antsipiriany momba ny fizahantany amin'ireto manaraka ireto:
Misy mpitarika miteny anglisy ve?
Isan'ny olona ao amin'ny vondrona tsirairay (latsaky ny 15 no tsara indrindra)
Misy sakafo ve ao?
Misy saran-dalamby sy fiarabe fitateram-bahoaka mankany Machu Picchu ve misy vidiny?
Ny vidin'ny fidirana Machu Picchu amin'ny vidiny ve?
Moa ve ny fitsangatsanganana an'i Huayna Picchu tafiditra ao amin'ny làlana (ary raha tsy izany, safidy izany)?
Ny fotoana laniny amin'ny tranokala (telo ka hatramin'ny adiny efatra dia ny marika)
Ho an'ny Inca Trail sy fifaninanana hafa , andramo ireto manaraka ireto:
Isan'ny olona ao amin'ny vondrona tsirairay
Inona no fitaovana omen'ny fahafahana misafidy (kitapo fatoriana, lay, fatana, sns)?
Misy sakafo sy zava-pisotro isan'andro ve ao?
Moa ve mpiandry ondry na biby fiompy azo omena?
Fotoana fahatongavana tao Machu Picchu (aloha kokoa ny tsara kokoa, tsara indrindra ho an'ny fiposahan'ny masoandro ao Machu Picchu )
Ny fotoana laniny amin'ny tranokala (sy ny fidirana amin'ny Huayna Picchu)
Soso-kevitra fanampiny: Raha mandamina mialoha ny fitsangatsanganana ianao, miantsoa na manefa mailaka ny serivisy mety ahitana fanontaniana na roa. Ny valinteny dia mety hahatonga anao hahatakatra ny fenitry ny serivisy mpanjifa sy ny fifantohan-tsain'ny tena manokana amin'ny antsipiriany.
Soso-kevitra 5: Birao ny Machu Picchu Tour
Amin'ny fikarohanao mikaroka mankany amin'ireo masoivoho mpizaha tany roa na telo, ny sisa tavela dia ny mampitaha ny vidiny, manamarina ny fisiana ary manorata ny fitsidihanao. Ny famandrihana ny fitsangatsanganana Machu Picchu mialoha dia tsara foana, ary raha te-hanaraka ny Inca Trail ianao, hamandrika toerana, farafahakeliny roa na telo volana mialoha ny tena ilaina.
Azonao atao ny mamandrika tranokala hafa sy fitsangatsanganana mandritra ny andro iray rehefa tonga any Cusco ianao, saingy mety tsy maintsy mijanona mandritra ny andro vitsivitsy ianao. Amin'ny ankapobeny, mora sy azo antoka kokoa ary manome toky bebe kokoa ny fananana ny fitsidihana nataonao ary voamarina mialoha ny hahatongavanao ao Cusco.
Sandwich.com any Miraflores, Lima
Mijery ny Malaria any Però
Ohatrinona ny mandinika ny lalan'ny Inca
Ley Seca any Peru
Larcomar ao Miraflores, Lima
Sarin'ny tetezan'i Normandie any Frantsa
10 Milwaukee Summer Activities
Ny pasipaoro Karaiba, ny Visa, ary ny fepetra ilaina amin'ny ID
Zavatra atao any Orlando
Ireo akanjo malaza indrindra amin'ny vatolampy kely 2016
Paka any Danemark - Ny Tradition Paska Danemarka
Austin Gay Bars Guide: Best Austin Texas Gay Nightlife
Top Budget Health Spas
Aiza no hizaha ny fomba fijery tsara indrindra momba an'i Paris
Firy ny fotoana tokony hizoranao amin'ny fiaramanidina mampifandray anao?
Ny batisan'i Caesars Palace Bacchanal tokony ho ao amin'ny lisitrao
Tokony Hitsidika an'i Madrid ve Ianao na Barcelona?
Inona no atao hoe fitsaboana ara-pahasalamana?
Manaova fialan-tsasatra mandritra ny fialan-tsasatra tsy tapaka
© 2020 mg.traasgpu.com